Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो – Emountain TV
काठमाडौं, २९ साउन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । राष्ट्रीय सभामा दर्ता भइ करिव १ महिना अघिदेखि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको क्रममा छ । विधेयकमाथि छलफल गरी सरोकारवालहरुसँग छलफल र सुझाव संकलन गर्ने काम भईरहेको छ । छलफलको क्रममा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
संघियता हाम्रो देशमा नयाँ अभ्यास हो । हाल देशमा तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर व्यवहारीक रुपमा संघिएता कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष वितिसकेको छ । तर पनि हालसम्म तिनै तहको सरकारको श्रोत वाँडफाँड अधिकार प्रयोगका सम्वन्धमा स्पष्ट कानुन वन्न नसक्दा कतिपय विषयमा समस्या वारम्ंवार आउने गरेको छ ।
साझा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन नवन्दा सवैभन्दा बढि समस्या योजना तर्जुमा देखिएको छ । श्रोत वाँडफाँड, कर्मचारी भर्ना, सुरक्षाकर्मी परिचालन, सचिव नियुक्ती, विकास आयोजना संचालन लगायतका समस्याहरु अहिले देखिइसकेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो पनि उठिरहेको छ ।
साझा अधिकार सम्बन्धमा हल गर्ने र प्राकृतिक श्रोत वाँडफाँडमा स्पष्ट कानुन नवन्दा वेलावेलामा संघ र प्रदेश सरकारविच मनमुटावको स्थीति श्रीजना भएको छ । श्रोत बाँडफाँडको विवादमा प्रदेश २ सरकारले त संघ सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा नै हाल्यो । तीन तहका सरकारबीच समस्या आउन नदिन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बिधेयक तयार हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइ करीव १ महिनादेखि विधायन व्यवस्थापन समितीमा छलफलको क्रममा छ । सुझाव संकलनका क्रममा बिधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद्लाइ अधिकार सम्पन्न गराएर लैजानुपर्ने प्रदेश सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सांसदहरुले जस्तै राष्ट्रीयसभाका सदस्यहरुले बिधेयक पास गर्दा साझा दायित्वका कुराह्रुलाइ सँगै बसेर छलफलका माध्यमवाट ऐन बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सवै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले एकल सुचि र साझा सुचिका कानुनहरु तत्काल वनाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसका लागी यो बिधेयकले आधार प्रष्ट पार्नुपर्ने सुझावहरु आएको छ । केन्द्र सरकारले कानुन वनाउन ढिलाइ गरेको र प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरको भन्ने गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको रहदै आएको छ ।